My Vodafone New Zealand 4.13.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.13.2 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား My Vodafone New Zealand
My Vodafone New Zealand ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Vodafone နယူးဇီလန်အဘို့အကြှနျုပျ၏ Vodafone
ဒါဟာငါ့အ Vodafone နှင့်အတူသွားလာရင်းသင့်မိုဘိုင်း၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဖြစ်စူပါလွယ်ကူပါတယ်။ , သင့်ရဲ့လက်ရှိချိန်ခွင် Get ဘယ်လောက် data တွေကိုထုတ်စစ်ဆေးနှင့်မည်မျှ TXTs & မိနစ်သင်ထားခဲ့။ သင်ကပင်သင့်ရဲ့ Prepay တက်ထိပ်ဆုံးသို့မဟုတ်သင့်ဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
•သင်သည်စွန့မည်မျှ TXTs, မိနစ်နှင့်ဒေတာများထုတ် Check
•ထိပ်တန်းတက်သင့်ရဲ့ Prepay မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်သင့်ဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်
•, Add ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်သင့် Prepay-Ons များ Add ဖျက်သိမ်း
•သင့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားများထွက်စစ်ဆေးခြင်း - နိုင်ငံရပ်ခြားပြောင်းရွှေ့လျှင်ပင်!
•သင်အသစ်တစ်ခုကို SIM ကဒ်ရှိပါကသင်အလွယ်တကူဆိုင်ကိုပဌနာသို့မဟုတ်သွားရောက်စရာမလိုဘဲသင့် SIM သင်ကိုယ်တိုင်လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကပင် SIM ကတ် barcode scan မှသင့်ကင်မရာကိုသုံးနိုင်သည်
သင်တို့ရှေ့၌အကြှနျုပျ Vodafone အသုံးပြုဖူးပါဘူးလျှင်သင်ယခု App ကိုအတွင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကအခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်သတိပြုရန်ကျေးဇူးတင်စံဒေတာစွဲချက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
My Vodafone New Zealand အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
My Vodafone New Zealand အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
My Vodafone New Zealand အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
My Vodafone New Zealand အား အခ်က္ျပပါ
apps စတိုး 2.71M 3549.12M
My Vodafone New Zealand ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း My Vodafone New Zealand အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.13.2
ထုတ်လုပ်သူ Vodafone NZ Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.vodafone.co.nz/legal/policy/privacy/
လက်မှတ် SHA1: A6:BD:3C:15:25:30:2E:14:60:CF:F7:E3:F4:B7:AA:35:D2:27:4B:C4
အဖွဲ့အစည်း (O): Vodafone New Zealand Limited
My Vodafone New Zealand APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ